Imikhiqizo Yokuphromotha evela ku-Leaderpromos.com: Intengo, Insizakalo noMkhiqizo
Leaderpromos.com: Imikhiqizo Emikhulu Yokuphromotha, Insizakalo Enhle!
NgoLwesithathu, ngoMashi 9, 2011 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Njengohambo lwami lokuya e- I-Webtrends Yenza 2011 inkomfa ibisondela, bengibheke okunye okuthengiswayo okuzosabalalisa emcimbini. Njengomxhasi womcimbi, enye yezinketho bekungukuhambisa izinothiphedi kubabekhona. Njengebhizinisi elincane, vele, lokhu bekungukutshalwa kwemali ebengikhathazeke kakhulu ngakho.
Ngingasilinganisela kanjani isabelomali esiqinile, ngibe ngumxhasi opholile womcimbi, ngibe ngisasabalalisa i-shwag ebucayi ababekhona abazoyithokozela futhi bayiphendule? Ngithole impendulo yami nge Ukulele.com. Cha, kunjalo hhayi okuthunyelwe okuxhasiwe futhi ngeke ibe nezixhumanisi ezihambisanayo… Ngiyakholelwa nje ekwaziseni ngemisebenzi emihle nemikhiqizo uma nginikezwa ithuba.
Nginqume ukuthenga ezinye izincwajana zokubhala ezingaphezulu eza nezikhala ezazizoba nalo lonke ulwazi lwethu lokuxhumana nabo. Ngabayala, ngabuyisa ubufakazi ngokushesha nge-imeyili, futhi i-oda lagcwaliseka futhi lathunyelwa eSan Francisco ezinsukwini ezimbalwa! Njengoba ngingawubonanga empeleni umkhiqizo, nganginovalo ngokutshalwa kwemali. Izindleko zazizwakala kakhulu ngakho ngangikhathazekile ngokuthi ikhwalithi ngeke ibe… noma okubi kakhulu… ngeke zikwenze ngesikhathi.
Imiphumela yaba mihle!
Ngenkathi ngihambela phezulu Isikhulu esiphezulu u-Alex Yoder emcimbini, ngahlangatshezwa ngokugona okukhulu nokubonga ngamanothi wokupholisa apholile! Awesome !!! Ngithole isihlalo futhi angikwazi ukuchaza indlela engangiziqhenya ngayo ukubona abantu abaningi kangaka bethatha amanothi, bexakana nezibaya ezisebenza nge-lever, bese behamba nazo emcimbini. Zazipholile ngaze ngacela uWebtrends ukuthi athumele okungeziwe ehhovisi. Benzile, futhi sinabo namhlanje. (Ngiyabonga Webtrends!).
Sibonga ngokukhethekile kubantu ku- Ukulele.com. Ama-notepad aphume emahle kakhulu ngawanikela esikhundleni samakhadi ebhizinisi engxenye esele yomcimbi! (Ukungasho ukuthi ngangingenawo amakhadi ebhizinisi ngoba umthengisi ohlukile ongagagulwanga igama wayephuzile ngabo !!!). Uma ume nge Highbridge, qiniseka ukubamba eyodwa!
Ukuguqulwa, Okuqukethwe kanye ne-Rock Operas
Kuvulelwe Ibhizinisi: Ukubloga Kwebhizinisi
Nov 14, 2011 ngo-3: 26 AM
I-Stay Sourced, umphakeli wemikhiqizo yokuphromotha, wethule uhla lwemikhiqizo enobungane ekhombisa ukusetshenziswa okuyinqaba nokumangalisayo kwezinto ezenziwe kabusha. Uma inkampani yakho ifuna imibono ethokozisayo nenesimilo yokuthengisa, kuningi ongakwenza: ama-mousemats nama-coasters avela kumathayi asetshenziswe kabusha, amapeni oqalo, ama-yo-yos namapensela angalandela okhokho babo emuva kwecala elidala le-CD. Mhlawumbe igajethi ethakazelisa kakhulu eqoqweni labo le-eco-friendly yiwashi elingena-batri elinamandla, elenza ukuthi kube nengxoxo ethokozisayo phakathi kweqembu lapha. Ngeqembu elihlakaniphile, kube nezincazelo ezithile ezingakhathazeki zokuthi lokhu kungenzeka ukuthi kusebenza kanjani futhi akukho lutho ebesingalufuna esizindeni somphakathi. Uma kukhona ososayensi, abezazi zamakhemikhali noma ama-voodoo-ists laphaya abangaveza ukukhanya kulokhu, sicela uphawule futhi usikhiphe osizini lwethu.